Polyamides additive, PC additive, PVC Antioxidant-Yihoo
Ukubonelela ngezongezo zepolymer kwizicelo ezithile, inkampani iseke uthotho lwemveliso egubungela ezantsi kwezicelo: I-PA yokuguqula kunye nezongezo zokuguqula, izongezo ze-PU ezinegalelo, iipolymization zePVC kunye nezongezo zokuguqula, izongezo zokuguqula iPC, izongezo zokuguqulwa kwe-TPU elastomer, izongezo ze-VOC ezisezantsi zemoto , izongezo zearhente zokugqibezela impahla, izongezo zokwaleka, izongezo zezithambiso, i-API kunye nabaphakathi kunye nezinye iimveliso zeekhemikhali ezinje nge-zeolite njl. -yeka inkonzo apha.
imveliso yethu iyavela
Inkampani inikezele ngenkonzo kumakhulu abathengi ngaphakathi nangaphandle kwe China, ngenxa yeenzuzo zothutho olululo kunye nolungiselelo lwedolophu yolwandle.
Inkampani ihlawula ngakumbi i-R & D kunye nokubonelela ngabancedisi kumacandelo ahlulelweyo. Sikhupha iinkalo ezine eziphambili zesicelo se-PA, i-PU (kubandakanya i-TPU elastomer kwizihlangu), i-PVC kunye nezongezo ze-VOC ezisezantsi zezithuthi, kunye nokubonelela ngabancedisi kwipolymerization, anti-ukuguga kunye nokulwa nokudubula.
Inkampani isebenzisane neziko le-R & D e-Mainland naseTaiwan China, enokuthi ibonelele ngemveliso eyenziwe ngokwezifiso okanye iimveliso zefomula.
Inkonzo enye yokupakisha
Abathengi banokonwabela iimveliso ezipakishwe kwibhokisi enye kunye nenkxaso yezobuchwephesha kwipakethe enye xa bethenga kwinkampani.
Amalungiselelo kunye noVimba
Ukuthembela kwizibonelelo zokuhambisa ngenqanawa yamazibuko eShanghai naseQingdao, sinokubonelela ngokufanelekileyo ngeenkonzo zokuhambisa kubathengi baphesheya. Kwangelo xesha, sine-inventri yeeodolo eziqhelekileyo kwindawo yokugcina kumazibuko amabini.
Iindaba kunye neziganeko